सभामुख सापकोटाको गैरसंवैधानिक व्यवहारका कारण संवैधानिक परिषद बैठक प्रभावित – SajhaPana
सभामुख सापकोटाको गैरसंवैधानिक व्यवहारका कारण संवैधानिक परिषद बैठक प्रभावित
साझा पाना २०७७ पुस १ गते ०८:१४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको गैरसंवैधानिक व्यवहारका कारण संवैधानिक परिषद बैठक प्रभावित बनेको छ । निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने पदीय भूमिकामा रहेपनि सभामुख सापकोटा भने पार्टी भित्र गुटको इशारामा चलेका छन् । सोही कारण उनी मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी भएनन् ।
सापकोटालाई नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएका थिए । नेकपाभित्र विभाजनको प्रयासमा लागेको माधव नेपाल प्रचण्ड समूहको पक्षधरता लिँदा परिषद बैठक अघि बढ्न सकेन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित विहानको बैठक सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण साँझ ५ बजेलाई सारिएको छ ।
सभामुखले लगातार दुई पटक परिषद्को बैठक बहिस्कार गरेका छन् । यो संवैधानिक दायित्वको उल्लंघन हो । सभामुख भएपछि दलको आवद्धता समेत त्याग्नु पर्ने पदमा बसेका उनले गुटको कार्यकर्ताका भूमिका खेलेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको ब्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
उनले कि सभामुख पदत्याग गर्नु पर्यो, कि गुटको सदस्यता ? भन्दै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
सभामुख चयन भइसकेपछि तटस्थताका लागि कुनै पनि दलमा आवद्धता राख्न मिल्दैन । त्यसैले नै दलमा रहेको जिम्मेवारीबाट राजिनामा दिई स्वतन्त्र रहनुपर्छ । सभामुख आफै कुनै एउटा दलको, त्यसमा पनि कुनै गुटको इशारामा काम गर्न थाल्ने हो भने संसदमा तटस्थता कसरी रहला ? आजको उनको कार्यशैलीबाट प्रश्न उब्जिएको छ ।
सदस्यहरुबीचकै खिचलोको कारण लामो समस्यसम्म परिषद बैठक बस्न सकेको छैन । जसका कारण अख्तियार, निर्वाचन, मानवाधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगका ४५ वटा पद रिक्त छन् । नियुक्ति नै हुन नसकेपछि ती सबैको काम कारवाही समेत प्रभावित भएका छन् ।
बैठकमा सहभागी भई आफ्नो मत राख्न छोडेर सभामुख सापकोटाले पटक पटक अनुपस्थिति देखाई ती संवैधानिक आयोगलाई समेत पंगु बनाउन खोजेका छन् । ‘कम्तीमा पदको मर्यादा, गरिमा राख्न बैठकमा गएर आफ्ना सहमति, असहमति राख्न सकिन्थ्यो । एउटा नेताले भनेको भरमा सापकोटाले आफू सभामुख पदमा छु भन्ने विर्सिएको जस्तो छ’, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एक कानुन व्यवसायीले भने ।
ट्याग : #hot, #अग्निप्रसाद सापकोटा